Tuchun Ah CNDF-Falam Pasaltha Minung Pali Cu Ralhrang Nih An Thah Hna – Thechinlandtoday
Tuchun Ah CNDF-Falam Pasaltha Minung Pali Cu Ralhrang Nih An Thah Hna
admin June 29, 2021 LeaveaComment on Tuchun Ah CNDF-Falam Pasaltha Minung Pali Cu Ralhrang Nih An Thah Hna
Chinram kulh falam peng chungah 2021 june 29 ni zinglei suimilam 7:30 in ralhrangbu le CNDF-Falam karlak ah suimilam2chung tluk i kahdohnakachuak.ralhrangbu lei in minung 10 renglo an thih pin ah m tampi hliamhma an tuar tiah theihasi.CNDF-Falam lei in minung4nih ram le miphun caah an nunaliam iadang minung pathum nih hliamhma an tuar tiah theihasi.a tu bantuk in i kahdohnakachuak mi kongah CNDF-Falam hmunkhuar nak pakhat cu ralhrangbu hna nih hriamnam lian he an va fuh hna caah mah le mah i runvennak caah kan rak kah mi hna an si tiah CNDF nihachim.
Hi konghe pehtlai in CNDF-Falam nih mah tin cathanhatuah.တိုက်ပွဲသတင်း ထုတ်ပြန်ခြင်းရက်စွဲ။ ။၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၉) ရက်ချင်း ပြည် နယ်၊ ဖလမ်းမြို့နယ်အတွင်း ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၉) ရက်နေ့ မနက် ၇:၃၀ အချိန်မှစတင်ကာ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နှင့် မိမိတို့ Chin National Defense Force (CNDF) တို့အကြား (၂) နာရီခန့် ပစ်ခတ်မှုများ ဖြစ်ပွါးခဲ့ရာ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်မှ အနည် းဆုံး (၁၀) ဦး သေဆုံးကာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ အများအပြားရှိကြော င်း သိရှိရပြီး မိမိတို့ CNDF မှ (၄) ဦးကျဆုံး၍ မစိုးရိမ်ရသည့် အခြေအနေဖြင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိသူ (၃)ဦး ရှိခဲ့ပါသ ည်။Chin Ramkulh, Falam Peng sungah 2021 June 29 Ni, zinglam 7:30 ihsi thokin Tualthat Acozah ralkap pawl le CNDF karlak ah nahzi2sung hrawng kahawknakathlengih, Tualthat Acozah ralkap lam inamalbik mi 10 an thi ih, tam nawn in hriamhma an tuarasi. Kanmah CNDF lam cun miralqha ralkap4in ram le miphun hrang nunnak an hlanih mi3in thlaphan um lomi hriamhma an ngahasi.
ဖြစ်စဉ်မှာ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်မှ မိမိတို့ CNDF ရောက်ရှိနေသည့် နေရာတခုကို ထိုးစစ်ဆင်ရန် အင်အားအများအပြားဖြင့် လက်နက်ကြီးများ အလွန်အကျွံ အသုံးပြုကာ ကျူးကျော် ဝင်ရောက်လာသည်ကို ခုခံကာကွယ် ပစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယမန် နေ့များတွင် အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီတပ်မှ ဖလမ်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာတစ်ချို့၌ ဝင်ရောက်ပြီး အိမ်မွေးတရိစ္ဆာန်များ အဓမ္မ လုယူသတ်ဖြတ် စားသောက်ကာ နေအိမ်တစ်ချို့ ဖျက်စီးမှုများလည်း ကျူးလွန်ခဲ့ပါသည်။ Tualthat Acozah ralkap pawl in CNDF pawl kan thlennak hmun pakhat ah in kap dingin ralthuam tum pawl nasa takih hmangin, in ra nawrmi cu mah le mah humhim-aw dingin CNDF lamin kan rak kap ve miasi. Mizan sun lamah Tualthat Acozah ralkap pawl in Falam Peng sungih khuate hrekkhat ah lutin qilva pawl hranhram ih longin an ei sak hleiah, inn hrekkhat tla an siatsuahasi.
လက်တလောတွင် အကြမ်းဖက်စစ်သူပုန်တချို့ ဆုတ်ခွါသွားပြီး အခြေအနေ ယာယီငြိမ်သက်နေ သေးသော်လည်း တိုက်ပွဲများ ဆက်လက်ပြင်းထန်လာနိုင်ဖွယ်ရှိသဖြင့် ဒေသခံပြည်သူများထံ အသိပေးလိုသည်မှာ လွန်စွာစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းမရှိပဲ သတိကြီးစွာ သွားလာနေထိုင်ကြရန်နှင့် မိမိတို့ CNDF ၏ မူလရပ်တည်ချက်ဖြစ်သည့် ပြည်သူများ၏ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကို ကာကွယ်ရန်နှင့် ပြည်သူများ ထိခိုက်နစ်နာမှု မရှိစေရန် အတတ်နိုင်ဆုံး လှုပ်ရှားသွားမည်ဖြစ်သည်။Atufang ah Tualthat Acozah ralkap hrekkhat dungsip in kahawknakadai hrih vek nan, kahawknak hialuarkai vivo hrih thei ruangah tualsung mipi hnenih kan than duhmi cu ralring zetin thlaphang tuk lo tei’ um dingin le CNDF ih kan dinsan cu Mipi humhim ding kan si vekin Mipi lam harsatnak thlen lo thei tawpih cangvaih vivo kan tumasi.
Ralhrangbu Nih Chimra Kulh Sipin Lutlai Sawmlili An Rian An Chuah Pin Ah An Thil An Fir Piak Rih Hna →
← Chin Ramkulh Chung Sipin Pawl Cu An Loh Ko Ne Tung